Jesu Anoona Imwe Chirikadzi Murombo (Mako 12) | Upenyu hwaJesu
MATEU 23:25–24:2 MAKO 12:41–13:2 RUKA 21:1-6
JESU ANOENDERERA MBERI NEKUSHORA VATUNGAMIRIRI VECHITENDERO
CHIRIKADZI INOSHAYIWA INOKANDA MARI SHOMANANA MUMUDZIYO WOKUISIRA MARI
Musi waanopedzisira kutsika patemberi, Jesu anoenderera mberi nekufumura vanyori nevaFarisi achitaura pachena kuti vanyengeri. Anoshandisa mashoko ekufananidzira achiti: “Munochenesa kunze kwekapu nokwedhishi, asi mukati makazara nezvakapambwa nokunyanyisa. MuFarisi akapofumara, tanga kuchenesa mukati mekapu nemedhishi, kuti kunze kwazvo kuvewo kwakachena.” (Mateu 23:25, 26) VaFarisi vanoedza zvese zvavanogona kuti vave vakachena nechekunze uye kuti vanzi vakachena maererano neMutemo, asi havafungi zvavari nechomukati uye vari kutadza kuchenesa mwoyo yavo.
Unyengeri hwavo hunoonekawo pakuti vanoda kuvaka nekushongedza makuva evaprofita. Asi Jesu anotaura kuti ivo “vanakomana vevaya vakaponda vaprofita.” (Mateu 23:31) Vari kuratidza kuti ndizvo zvavari pavari kuedza kuuraya Jesu.—Johani 5:18; 7:1, 25.
Jesu anobva ataura kuti chii chichaitika kuvatungamiriri vechitendero ava kana vakasapfidza achiti: “Nyoka, vana venyoka, muchatiza sei kutonga kweGehena?” (Mateu 23:33) Vanyori nevaFarisi ava vakaipa, vachaparadzwa zvachose sezvinoitwa marara anopisirwa muMupata waHinomu [kana kuti Gehena] uri pedyo neguta ravo.
Vadzidzi vaJesu vachasara vachimumiririra sevaprofita “nevarume vakachenjera nevarayiridzi vevanhu vose.” Vanhu vachavabata sei? Achitaura nevatungamiriri vechitendero, Jesu anoti: “Muchauraya vamwe [vadzidzi vangu] nokuvaroverera, uye muchazvambura vamwe vavo mumasinagogi enyu nokuvatambudza muguta neguta; kuti ropa rose revakarurama rakadeurirwa panyika riuye pamuri, kubvira paropa raAbheri akarurama kusvika kuropa raZekariya . . . [wamakaponda].” Anovaudza kuti: “Chokwadi ndinoti kwamuri, Zvinhu zvose izvi zvichauya pachizvarwa chino.” (Mateu 23:34-36) Izvi zvinozoitika muna 70 C.E., mauto eRoma paachaparadza Jerusarema ouraya zviuru zvevaJudha.
Jesu anorwadziwa paanofunga zvinhu zvinotyisa kudaro zvichaitika. Anotaura achiratidza kusuruvara achiti: “Jerusarema, Jerusarema, muurayi wevaprofita neanotema nematombo vakatumwa kwaari,—ndaiwanzoda sei kuunganidza vana vako, sokuunganidza kunoita huku nhiyo dzayo pasi pemapapiro ayo! Asi imi hamuna kuzvida. Tarirai! Maramwirwa imba yenyu.” (Mateu 23:37, 38) Vanhu vari kunzwa mashoko aya vanogona kushaya kuti ari kureva “imba” ipi. Angave ari kureva temberi yakanaka chaizvo iri muJerusarema iyo inoita seiri kuchengetwa naMwari here?
Jesu anobva awedzera kuti: “Ndinoti kwamuri, Kubvira zvino hamuchazombondioni kusvikira mati, ‘Akakomborerwa iye anouya muzita raJehovha!’” (Mateu 23:39) Atora mashoko aya pauprofita huri pana Pisarema 118:26 iyo inoti: “Ngaakomborerwe Iye anouya nomuzita raJehovha; Takakukomborerai tiri mumba maJehovha.” Zviri pachena kuti kana temberi iyi yangoparadzwa, hapana achauya kwairi muzita raMwari.
Iye zvino Jesu anoenda kudivi retemberi rine midziyo yekuisira mari. Mudziyo mumwe nemumwe une buri nechepamusoro saka vanhu vanokanda mipiro yavo nepaburi iri. Jesu anoona vaJudha vakasiyana-siyana vachikanda mipiro yavo, vapfumi “vachidonhedzera mari zhinji” sezvipo. Anobva acherechedza imwe chirikadzi inoshayiwa ichikanda ‘tumari tuviri twusingambokoshi.’ (Mako 12:41, 42) Jesu anoziva kuti Mwari anofadzwa nechipo chapiwa nechirikadzi iyi.
Jesu anodana vadzidzi vake oti kwavari: “Chokwadi ndinoti kwamuri, chirikadzi iyi murombo yadonhedzera kupfuura vose vadonhedzera mari mumidziyo yokuisira mari.” Zvingadaro sei? Anotsanangura kuti: “Vose vadonhedzera vachibvisa pamari yavo yakasara, asi iye, pakushayiwa kwake adonhedzera yose yaanga ainayo, inomuraramisa.” (Mako 12:43, 44) Mafungiro nemaitiro echirikadzi iyi akasiyana neevatungamiriri vechitendero zvechokwadi.
Nekufamba kwenguva musi waNisani 11 iwoyo, Jesu anobva patemberi kekupedzisira. Mumwe wevadzidzi vake anoti: “Mudzidzisi, onai! matombo acho kuti akaita sei uye zvivako zvacho kuti zvakaita sei!” (Mako 13:1) Zvechokwadi mamwe matombo akavakiswa temberi akakura zvikuru, zvichiita kuti itaridzike seyakasimba zvikuru zvokuti hapana kwainoenda. Saka mashoko anozotaurwa naJesu haangambotadzi kuvashamisa paanoti: “Unoona zvivako izvi zvikuru here? Hapana dombo richazombosiyiwa pano riri pamusoro perimwe dombo risingakoromorwi.”—Mako 13:2.
Pashure pekunge ataura zvinhu izvi, Jesu nevaapostora vake vanoyambuka Mupata weKidroni vokwira muGomo reMiorivhi. Vava mugomo kudaro, pane paanombogara nevaapostora vake vana vanoti Petro, Andreya, Jakobho, naJohani. Vari ipapo vanoyeva temberi inoyevedza iri nechepazasi.
Jesu anoitei musi waanopedzisira kusvika patemberi?
Jesu anotaura kuti chii chichaitika kutemberi?
Nei Jesu akati chirikadzi inoshayiwa yakapa mari yakawanda kupfuura vapfumi?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zuva raJesu Rekupedzisira Patemberi